သဟာယအင်တာနက်ရေဒီယို မှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သော ဆရာတော်၏ အစီအစဉ် (၇- နိဂုံး) 3.6.2019 တနင်္လာနေ့ – ၀ီရသူ
သဟာယအင်တာနက်ရေဒီယို မှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သော ဆရာတော်၏ အစီအစဉ် (၇- နိဂုံး) 3.6.2019 တနင်္လာနေ့
မှတ်ထားပါ။ NLD အစိုးရက တိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုကာကွယ်ရင် ၀ီရသူ NLD အစိုးရကို အပြည့်အ၀ထောက်ခံပါမယ်။ စစ်တပ်က တိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုကာကွယ်နေလို့ စစ်တပ်ကို ကျုပ်အပြည့်အ၀ ထောက်ခံနေတာ။ ဒါ ခင်ဗျားတို့ နားလည်ရမယ်။
အဲ့လိုပဲ ကိုယ်ကဖြင့် ဒီမိုကရေစီ စံမီအောင် မကျင့်ကြံနိုင်သေးဘူး။ စာအုပ်ကြီးက ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညွှန်းနဲ့ မညီလို့ဆိုပြီး စာအုပ်ကြီးကို ဇွတ်ပြင်နေတဲ့သူတွေလည်း သတိထား။ ခင်ဗျားတို့ တောက်ချိုးတွေကို အရင်ပြင်ကြ။ စာအုပ်ကြီးကို နောက်မှပြင်ကြ။ ခင်ဗျားတို့ တောက်ချိုးတော့ မပြင်ဘဲနဲ့ စာအုပ်ကြီးကို အပြစ်ပုံမချနဲ့။ ခင်ဗျားတို့ ပြည်သူလူထုကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ ဥပဒေတွေကို ဖျက်ပစ်တယ် မဟုတ်လား။ အဲဒီအတွက် ကျုပ်ပြောပါဦးမယ်။
ခုဒ္ဒက နိကာယ်၊ ဇာတက ပါဠိတော် ၊ တိက နိပါတ် ၊ ဗျဂ္ဃဇာတ်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ တောဆိုတာ ခြင်္သေ့နဲ့ကင်းပြီးတော့လည်း မနေကောင်းဘူးတဲ့။ ရှင်းလား အဲဒီလိုပဲ ခြင်္သေ့နဲ့ကင်းပြီးနေရင် တောက တောနဲ့မတူဘဲ တောပြုန်းသွားလိမ့်မယ်။ တိုင်းပြည်ဆိုတာ စစ်တပ်နဲ့ကင်းပြီးမနေကောင်းဘူး။ စစ်တပ်မရှိရင် သူ့ကျွန်အောက် ရောက်သွားလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားတို့ ဒီမိုကရေစီမပြည့်ဝသေးတဲ့အခါမှာ လွှတ်တော်ထဲမှာ စစ်သားတွေမရှိမဖြစ်လိုအပ်နေမယ်။ ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်တိုင် ဒီမိုကရေစီပြည့်ဝပြီဆိုလို့ရှိရင် စစ်သားတွေ တစ်ယောက်မှမထားနဲ့။ ကျုပ် လုံးဝ သဘောတူတယ်။
ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်တို်င်က ဒီမိုကရေစီ မပြည့်ဝပါဘဲနဲ့ ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားကို မကျင့်သုံးဘဲနဲ့ ဒီစာအုပ်ကြီးကိုပဲ လက်ညိုးထိုး ဒါကြီးကိုပြင်မယ် ပြင်မယ်ဆိုတာ သက်သက်နိုင်ငံရေး စတန့်ထွင်တာပဲလို့ ကျုပ်ယူဆတယ်။ နိုင်ငံရေး အကြပ်အတည်းတွေ့အောင် လုပ်တာပဲလို့ ကျုပ်ယူဆတယ်။ စစ်တပ်ကို တနည်းတဖုံ အနိုင်ကျင့်တာပဲလို့ ကျုပ်ယူဆတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာကို ခင်ဗျားတို့တတွေ ရောင်းစားတော့မှာမို့လို့ ဒီလို လုပ်နေတာပဲလို့ ကျုပ်ယူဆတယ်။ ဒါကြောင့် ကျုပ် အသည်းအသန် ကာကွယ်နေတယ်။ အဲဒီလို ကာကွယ်တာကြောင့် ခင်ဗျားတို့ တတွေက ပုဒ်မတွေတပ်တယ်၊ ၀ရမ်းထုတ်တယ်။ ရတယ်. ကိစ္စမရှိဘူး ကျုပ်က ဘုရားသားတော်ဗျ။ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဓမ္မစက်အတွင်းမှာ ကျုပ်နေထိုင်တယ်ဗျ။ ကျုပ် ဓမ္မစက်နဲ့ ရင်ဆိုင်ပြီးမှ ခင်ဗျားတုိ့ အာဏာစက်နဲ့ ရင်ဆိုင်မယ်။ ရှင်းလား။
ပြန်ပြောမယ် စစ်တပ်နဲ့ မဘသ ဆိုတာ ခြင်္သေ့နဲ့ ကျားလိုပဲ သူတို့ကြောင့် ခင်ဗျားတို့ အစ္စလာမ် မိုက်ဇေးရှင်းအန္တရာယ် ကင်းနေတာ။ သူတို့မရှိလို့ရင် သီဟိုဠ်လိုဖြစ်သွားမယ်။ ခင်ဗျားတို့အားလုံး သဘောပေါက်။ နားလည်လား ကြားလား ရှင်းလား။ သေချာမှတ်ထား။
3.6.2019 တနင်္လာနေ့ ဆရာတော်၏ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်သော အစီစဉ်မှ
သဟာယအငျတာနကျရဒေီယို မှ တိုကျရိုကျထုတျလှငျ့သော ဆရာတျော၏ အစီအစဉျ (၇- နိဂုံး) 3.6.2019 တနင်ျလာနေ့
မှတျထားပါ။ NLD အစိုးရက တိုငျးပွညျရဲ့အခြုပျအခွာအာဏာကိုကာကှယျရငျ ဝီရသူ NLD အစိုးရကို အပွညျ့အဝထောကျခံပါမယျ။ စဈတပျက တိုငျးပွညျရဲ့အခြုပျအခွာအာဏာကိုကာကှယျနလေို့ စဈတပျကို ကြုပျအပွညျ့အ၀ ထောကျခံနတော။ ဒါ ခငျဗြားတို့ နားလညျရမယျ။
အဲ့လိုပဲ ကိုယျကဖွငျ့ ဒီမိုကရစေီ စံမီအောငျ မကငျြ့ကွံနိုငျသေးဘူး။ စာအုပျကွီးက ဒီမိုကရစေီစံခြိနျစံညှနျးနဲ့ မညီလို့ဆိုပွီး စာအုပျကွီးကို ဇှတျပွငျနတေဲ့သူတှလေညျး သတိထား။ ခငျဗြားတို့ တောကျခြိုးတှကေို အရငျပွငျကွ။ စာအုပျကွီးကို နောကျမှပွငျကွ။ ခငျဗြားတို့ တောကျခြိုးတော့ မပွငျဘဲနဲ့ စာအုပျကွီးကို အပွဈပုံမခနြဲ့။ ခငျဗြားတို့ ပွညျသူလူထုကို ကာကှယျစောငျ့ရှောကျတဲ့ ဥပဒတှေကေို ဖကျြပဈတယျ မဟုတျလား။ အဲဒီအတှကျ ကြုပျပွောပါဦးမယျ။
ခုဒ်ဒက နိကာယျ၊ ဇာတက ပါဠိတျော ၊ တိက နိပါတျ ၊ ဗဂ်ြဃဇာတျဆိုတာ ရှိပါတယျ။ တောဆိုတာ ခွင်ျသနေဲ့ကငျးပွီးတော့လညျး မနကေောငျးဘူးတဲ့။ ရှငျးလား အဲဒီလိုပဲ ခွင်ျသနေဲ့ကငျးပွီးနရေငျ တောက တောနဲ့မတူဘဲ တောပွုနျးသှားလိမျ့မယျ။ တိုငျးပွညျဆိုတာ စဈတပျနဲ့ကငျးပွီးမနကေောငျးဘူး။ စဈတပျမရှိရငျ သူ့ကြှနျအောကျ ရောကျသှားလိမျ့မယျ။ ခငျဗြားတို့ ဒီမိုကရစေီမပွညျ့ဝသေးတဲ့အခါမှာ လှတျတျောထဲမှာ စဈသားတှမေရှိမဖွဈလိုအပျနမေယျ။ ခငျဗြားတို့ ကိုယျတိုငျ ဒီမိုကရစေီပွညျ့ဝပွီဆိုလို့ရှိရငျ စဈသားတှေ တဈယောကျမှမထားနဲ့။ ကြုပျ လုံးဝ သဘောတူတယျ။
ခငျဗြားတို့ ကိုယျတျိုငျက ဒီမိုကရစေီ မပွညျ့ဝပါဘဲနဲ့ ဒီမိုကရစေီ သဘောတရားကို မကငျြ့သုံးဘဲနဲ့ ဒီစာအုပျကွီးကိုပဲ လကျညိုးထိုး ဒါကွီးကိုပွငျမယျ ပွငျမယျဆိုတာ သကျသကျနိုငျငံရေး စတနျ့ထှငျတာပဲလို့ ကြုပျယူဆတယျ။ နိုငျငံရေး အကွပျအတညျးတှအေ့ောငျ လုပျတာပဲလို့ ကြုပျယူဆတယျ။ စဈတပျကို တနညျးတဖုံ အနိုငျကငျြ့တာပဲလို့ ကြုပျယူဆတယျ။
နိုငျငံတျောရဲ့ အခြုပျအခွာ အာဏာကို ခငျဗြားတို့တတှေ ရောငျးစားတော့မှာမို့လို့ ဒီလို လုပျနတောပဲလို့ ကြုပျယူဆတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကြုပျ အသညျးအသနျ ကာကှယျနတေယျ။ အဲဒီလို ကာကှယျတာကွောငျ့ ခငျဗြားတို့ တတှကေ ပုဒျမတှတေပျတယျ၊ ဝရမျးထုတျတယျ။ ရတယျ. ကိစ်စမရှိဘူး ကြုပျက ဘုရားသားတျောဗြ။ သံဃာ့အဖှဲ့အစညျးရဲ့ ဓမ်မစကျအတှငျးမှာ ကြုပျနထေိုငျတယျဗြ။ ကြုပျ ဓမ်မစကျနဲ့ ရငျဆိုငျပွီးမှ ခငျဗြားတုိ့ အာဏာစကျနဲ့ ရငျဆိုငျမယျ။ ရှငျးလား။
ပွနျပွောမယျ စဈတပျနဲ့ မဘသ ဆိုတာ ခွင်ျသနေဲ့ ကြားလိုပဲ သူတို့ကွောငျ့ ခငျဗြားတို့ အစ်စလာမျ မိုကျဇေးရှငျးအန်တရာယျ ကငျးနတော။ သူတို့မရှိလို့ရငျ သီဟိုဠျလိုဖွဈသှားမယျ။ ခငျဗြားတို့အားလုံး သဘောပေါကျ။ နားလညျလား ကွားလား ရှငျးလား။ သခြောမှတျထား။
3.6.2019 တနင်ျလာနေ့ ဆရာတျော၏ တိုကျရိုကျ ထုတျလှငျ့သော အစီစဉျမှ
မုဒိတာရပ်ဝန်း (မန်းမဟော်သဓာ အလှူတော်)အမှတ်စဉ်-၁၉၈